Eoropa Best Noely Markets By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Eoropa Best Noely Markets By Train
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 24/07/2020)
Noely Markets lamasinina manampy anao hiondrana an-Noely fanahy amin'ny nankany iray amin'ireo tsara indrindra Eoropa tanàna. Travel lamasinina ka hataoko maro ny traikefa mahagaga indrindra hatramin'izay! maro stations dia miorina ao am-pon'ny afovoan-tanàna, Nandeha lamasinina manao ny fomba tsotra indrindra hahatratra ny toerana halehany. Na dia handeha hiantsena ho fanomezana ho an'ny fianakaviana, sample ny mulled divay na ny hankafy fotsiny ny rivotra iainana Noely miaraka amin'ny olon-tiany, Azo antoka fa ianao manana tsy hay hadinoina fialan-tsasatra. Efa nanangona vitsivitsy ny Ny tsara indrindra Eoropa Noely tsena lamasinina fa tsy te-tara.
Florence, Italia no safidy voalohany ho an'ny Noely Markets lamasinina
Ny iray amin'ireo tena mahagaga fotoana amin'ny taona ho hitsidika Italia dia mandritra ny fotoana Noely. Makà fiaran-dalamby ho any Florence ka jereo ny tsangambato fahiny nampirehetiny-niakatra tamin'i Noely jiro sy manimbolo ny roasting chestnuts eny amin'ny rivotra.
Naples any Florence Lamasinina
Ny tsena malaza ho mitsidika in Florence dia Piazza Santa Croce in Florence. Izany dia feno hazo tsara tarehy tsoavaly, ary dia fantatra amin'ny maha-nentim-paharazana tsena Noely alemaina. Piazza Santa Croce no tonga lafatra mba haka toerana tsy manam-paharoa sy ny fanomezam-pahasoavana hanim-piny an-toerana.
Manamarika ny fiandohan'ny Noely ity Markets lamasinina amin'ny fiaran-dalamby nankany Londres. London Feno Noely fifaliana tamin'ny Novambra ho Janoary. Tsidiho ny London Hafakely ririnina Hyde Park ao amin'ny ary jereo ny hazo voaravaka jiro Fairy, lehibe tia manao ski ambony ivelan'ny trano rink, ny Ferris kodia, Carol mpihira sy ny sisa maro hafa ao an-tsena. Maro ireo tsena madinika misafidy avy any amin'ny London ny National Tantara Museum izay afaka hampahafana ao amin'ny miavaka ririnina rivotra miaraka amin'ny vera glühwein ary ny sasany fety sakafo. Plus, amin'ny mahafinaritra fiaran-dalamby saran tany Londres, anao dia tsy ny sasany fanampiny tahiry for more fiantsenana!
Nandeha tany enchanted Noely tsena lamasinina!! Berlin dia mora ny fiaran-dalamby in Europe izay mahatonga azy io ny toerana tonga lafatra. Fantaro ny renivohitra alemà ny manan-karena sy ny tantara mahavariana, ary koa ny tsena isan-karazany Noely, amin'ny vanim-potoana tsara indrindra fiantsenana, zava-mitranga sy ny culinary mahafinaritra!
Gendarmenmarkt dia tsy maintsy mahita! Izany setup dia nekena ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra Berlin ny Noely ny tsena. Hanandrana ny sasany eo an-toerana toy ny gingerbread treats, natono chestnuts, mulled divay sy ny saosisy ho ny farany Anarana Noely traikefa.
Prague, Repoblika Tcheky
Mifanohitra amin 'ireo tsena lehibe kokoa manerana an'i Eoropa, Noely ny Prague Markets lamasinina sy ny maha-azo itokiana kokoa ny manome fampiononana. Tsena tsirairay dia manana rivo-piainana tsy hay hadinoina. Minitra miala ny foibe fiantsonan'ny fiaran-dalamby dia mamirapiratra ao amin'ny trano bongo hazo voaravaka ny Old Town Prague kianja. Eto an-toerana ary nanangona ny mpitsidika manangona ho fillers, hazo kilalao, Hazo Noely firavaka, -tanana nanao firavaka, ary manitra labozia.
Ny safidy ny sakafo sy zava-pisotro hamidy teny an-tsena no tena malala-tanana. Mpitsidika Mety miandrandra nentim-paharazana Czech sakafo araka ny nitono henan-kisoa, Czech muffins, conkers, labiera, mull, ary ny hafa miavaka specialties amin'ny teny Czech nahandro. Misy zavatra tena miavaka momba ny Noely tsena any Prague. Araho anay ao Twitter ary Facebook mba maso avy ho an'ny tolotra farany.
Vienna, Aotrisy no farany Noely Markets lamasinina tanàna
Ankafizo ny tanàna tapaka amin'ny alàlan'ny lalamby mankalaza an'i Vienna! Vienna dia tanànan'ny Nostalgia sy olon-tiany ary manome ny tsara indrindra ny Noely Markets any Eoropa. The fiantsonan'ny fiaran-dalamby ihany minutes by fiarakaretsaka na fiara fitateram-bahoaka avy any afovoan-tanàna izay mahatonga ny Noely Vienna Markets amin'ny Train mora ny hahatratra. Ny malaza indrindra tsena amin'ity renivohitra mitranga amin'ny Rathausplatz, toerana tsara ny kianja dia indray mipi-jiro ny jiro sy ny hazo Noely mahatalanjona.
Andramo ny totohondriny sy matsiro nentim-paharazana zava-mamy rehefa mijery avy amin'ny fihinanam-bilona amin'ny fihinanam-bilona ho an'ny fanomezana sy ny haingon-trano, velona koa isan-kariva trompetra fampisehoana dia tanterahina amin'ny lavarangana Rathaus, izao no lehibe fomba tonga lafatra ny andro farany.
Ataovy ity Noely iray mba hahatsiaro amin'ny fitsidihana iray miavaka Eoropa Noely tsena lamasinina. Boky ny tapakila -tserasera mampiasa ny saran-dalana izay nahita sy hanao tahiry lehibe mialoha.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-christmas-markets-by-train/ - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / en ny / na / de sy ny maro hafa fiteny.
#tsena #taona vaovao #Noel Noely ChristmasbyTrain